मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न केपी ओलीलाई दबाब, को हुँदैछ बिदा कोको आउदै ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न केपी ओलीलाई दबाब, को हुँदैछ बिदा कोको आउदै ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने संकेत गरेका छन् । बिहीबार राति अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई बाध्यताका रुपमा चित्रण गरे ।
उनले बैठकमा मन्त्रीमध्ये कसैलाई असफल बनाएर हटाउन लागिएको नभई ‘केही साथीलाई बिदा गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने’ भनाइ राखेका थिए ।
‘पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आएको छ । तपाईंहरू कोही कसैले अन्यथा नमान्नुहोला । कुनै पनि बेला हामीमध्ये केही साथीहरू मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, एक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।
ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कोही असफल भएर हट्नुपर्ने बाध्यता नभएको तर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा हेरफेर हुनसक्ने बताएका थिए । निकै लामो समयसम्म सञ्चालित बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निकै बेर आफ्ना कुरा राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू विषयमा धेरै बेर आफ्ना धारणा राख्नुहुन्छ त्यही भएर पनि बैठक ढिलासम्म भएको हो’, एक मन्त्रीले भने ।
उनीहरूबीच शुक्रबार पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा यादवप्रकाश लामिछाने र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा पुण्य रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो । टपेन्द्र कार्कीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई महिनाअघि नै मन्त्रीहरुको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। साउनयता मन्त्रीहरुको काममा ढिलासुस्ती भएको र त्यसले जनतामा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने संकेत गरेका हुन्। उनले आफ्नो सचिवालयमा पनि हेरफेर गरेका छन्। आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुका बारेमा सचिवालय सदस्यहरुलाई जानकारीसमेत गराएका थिए। ‘सचिवालय सदस्यहरुले यो विषय तपाईंकै विशेष अधिकार भएकाले मन्त्री फेर्ने हल्ला गर्नेभन्दा पनि काम गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण छिटै गर्नुहोस् भनको छौं’, बैठकपछि एक सचिवालय सदस्यले भने। ती सदस्यका अनुसार अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा सचिवालयले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हो।
नेताहरुबीच सुरेन्द्र पाण्डेलाई मन्त्री बनाउने विषयमा आन्तरिक सहमति जुटिसकेको छ। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनको एक कार्यक्रममा पाण्डेको नाम लिएर मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेको बताएका थिए। नयाँ मन्त्रीका लागि वसन्त नेम्बाङ, पदम गिरी, प्रभु शाह, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, प्रेम आले, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतको नाम चर्चामा छ। त्यसैगरी घनश्याम भुसाल, पार्वत गुरुङ, यज्ञराज सुनुवार, विशाल भट्टराई, किसान श्रेष्ठ, छविलाल विश्वकर्माको नाम पनि चर्चामा छ। बैठकमा केही नामबारे चर्चा भए पनि उनीहरुलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारे छलफल भएको छैन।
बैठकमा अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि त्यसले सार्थकता पाएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिएर पार्टीको कार्यकारी अधिकार दाहाललाई दिने कुरा ओली आफैंले उठाएका थिए। तर दाहालले अहिले सहमतिमै काम भइरहेको छ भनेपछि सो विषय अघि बढेको थिए।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार दिने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए। ‘त्यस्तो कुनै छलफल भएको छैन’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। बैठकले नेकपा प्रवास इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोकेको उनले बताए। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार प्रवास इन्चार्जमा विन्दा पाण्डे, सहइन्चार्जमा लक्ष्मणदत्त पन्त, प्रवास अध्यक्षमा युवराज चौलागाईं र सचिवमा श्रीप्रसाद शाहलाई तोकिएको छ।
प्रकाशित मिति : आश्विन १०, २०७७ शनिबार ९ : ३३ बजे